Sida Loo Agtiisameeyo Qulqulkaaga Suuqgeynta Wax Soo Saarka Kordhinta | Martech Zone
Miyaad halgan ugu jirtaa inaad kobciso wax soo saarka ganacsigaaga oo dhan? Hadday sidaas tahay, keligaa ma tihid. ServiceNow ayaa soo warisay in maareeyayaasha maanta ay qarash gareeyaan Boqolkiiba 40 ee usbuuca shaqada hawlaha maamulka - oo macnaheedu yahay inay heystaan ​​in ka badan nus wiiggii inay xoogga saaraan shaqada istiraatiijiga ah ee muhiimka ah.
Warka wanaagsani waa inuu jiro xal: otomaatiga shaqada ee shaqada. Sideetan iyo lix boqolkiiba maamulayaasha ayaa rumeysan in howlaha shaqada otomaatigga ah ay kordhin doonaan wax soo saarkooda. Iyo 55 boqolkiiba shaqaalaha waxay ku faraxsan yihiin rajada nidaamyada otomaatiga ah ee beddelaya shaqada soo noqnoqda.
Haddii aad rabto inaad ka booddo istiraatiijiyad otomaatigaaga aaladda shaqada, tixgeli inaad qaadato xalka foomka khadka tooska ah ee noocyada badan leh. Foomamka onlaynka ah waa aalad aad u wanaagsan oo si hufan loogu maareeyo macaamillada dijitaalka ah, waxayna ka caawin karaan waax kasta oo shirkaddaada ka mid ah inay ka saaraan hawlo daal badan socodkooda shaqo.
Kooxaha suuqgeyntu waxay si gaar ah uga faa'iideysan karaan adeegsiga tikniyoolajiyadda foomka tooska ah si ay u abuuraan habab toosan. Waa kuwan dhowr dariiqo oo muhiim ah oo foomamka onlaynka ah ay u horumarin karaan qulqulka shaqada suuqgeynta wax soo saarka kordhay:
# 1: Waqti Ku Badbaadso Naqshadeynta Foomka Calaamadaha ah
Calaamadeynta ayaa qeyb weyn ka ah suuqgeynta. Wax kasta oo waaxdaada suuqgeynta ay hor dhigeyso macaamiisha - oo ay ku jiraan foomamka onlaynka ah - waxay u baahan yihiin inay iswaafajiyaan muuqaalkaaga iyo dareemadiisa. Laakiin sameynta foom sumad leh oo ka soo baxa xoqida waxay noqon kartaa waqti dhuuqis badan.
Eegala dhismaha foomka internetka.
Qalabka foomka ee khadka tooska ah ayaa ka caawin kara waaxdaada suuqgeynta inay si deg deg ah u naqshadeyso una daabacdo foomam sumadaysan si ay u soo ururiyaan tilmaamo badan Waxqabadka naqshadaysan ee lagu dhisay ayaa u oggolaanaya kooxdaada inay dejiso qaabab midabyo iyo xarfo ah iyo soo dejiso astaamo aan aqoon u lahayn koodh! Xitaa waxaad si habsami leh ugu dhex dhejin kartaa foomamka onlaynka ah websaydhkaaga si fudud.
Ma dooneysaa caddeyn tani shaqeyneyso? Awoodda calaamadeynta fudud iyo foomamka la duudduuban ee lagu bixiyo foom sameeyaha khadka tooska ah ee internetka ayaa caawiyay hal jaamacad kordhinta booqashooyinka kambuyuutarrada boqolkiiba 45 iyo kobcinta isqorista 70 boqolkiiba laba sano gudahood.
# 2: Si Degdeg ah oo Si Fudud Loogu Uruuriyo Hogaamiyayaal Tayo Leh
Aruurinta hoggaamiyeyaal aqoon u leh ganacsiga ayaa ah mudnaanta koowaad ee waaxaha suuqgeynta badankood. Iyo adeegsiga foom sameeyaha khadka tooska ah ee internetka si otomaatig u noqdo howlaha uruurinta macdanta waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh.
Iyadoo la adeegsanayo aaladda foomka khadka tooska ah, suuqleydu waxay abuuri karaan foomamka diiwaangelinta dhacdooyinka, foomamka xiriirka, sahannada macaamiisha, foomamka soo dejinta waxyaabaha, iyo waxyaabo kale oo fudud oo ururinta hoggaanka Waxay sidoo kale isticmaali karaan foom Analytics muuqaalada si loo ogaado culeysyada ka imaan kara foomka isla markaana si dhakhso leh u hagaajiya si kor loogu qaado heerarka beddelashada.
Mid ka mid ah wakaaladda suuqgeynta dhijitaalka ah tan ku tijaabi macmiilka bulshada caafimaadka oo ka caawiyey macmiilka inuu ururiyo oo uu maamulo 1,100 saxiix oo 90 dal oo keliya 30 maalmood gudahood. Hay'addu waxay sidoo kale kordhisay heerka beddelka foomka diiwaangelinta boqolkiiba 114.
# 3: U Samee Hub Macluumaad La Heli Karo oo loogu talagalay Macluumaadka Macdanta "Lead"
Marka la soo uruuriyo xogta macdanta `` lead '', waxay muhiim u tahay suuqleyda (iyo kuwa iibka iibiya) inay si fudud ku helaan si ay ula socdaan una falanqeeyaan tayada raadadka una raacaan marka loo baahdo. Dhismaha foomka internetka ayaa fududeyn kara howshan.
Xogta lagu soo ururiyey foomamka onlaynka ah ayaa lagu keydin karaa laguna eegi karaa xog ururin abaabulan, wadaag ah, taas oo u oggolaanaysa suuqleyda iyo dadka wax iibinaya inay eegaan oo ay la socdaan saxeexyada, weydiimaha, iyo hoggaamiyeyaasha. Xogta sidoo kale si toos ah ayaa loogu wareejin karaa aaladaha kale ee ay adeegsadaan kooxda, sida nidaamka suuq geynta emaylka ama maareeyaha xiriirka macaamiisha.
Jaangooynta howlahaaga suuqgeynta iyada oo loo marayo nidaaminta otomaatigga waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa waxsoosaarka waaxda. Adeegsiga foom sameeyaha khadka tooska ah si dhakhso leh loogu abuuro foomam summadaysan uruurinta hoggaanka hufan iyo in lagu maareeyo xogta keyd la heli karo waxay badbaadin kartaa suuqleyda waqti daran. Iyo kor u qaadida wax soo saarka kooxdaada suuqgeynta waxay noqon kartaa talaabada ugu horeysa ee lagu abuurayo hawlgal wax ku ool ah oo guuleysta guud ahaan ganacsigaaga.
Tags: ururi raadadkafoom infographicxirmoXarunta macluumaadkaxogta hogaamintadhismaha foomka internetkahogaamiyayaal uqalmatirakoobka foomka websaydhkafoomamka shabakadda